” SAREEN UFII WAL NYAATTU BINEENSA UFIRRAA HIN GARTU “ -
” SAREEN UFII WAL NYAATTU BINEENSA UFIRRAA HIN GARTU “
bilisummaa March 13, 2014	3 Comments
1 . Ergaa keeyrii ykn Toltuu <<< Isiin tun Hawaasa Gabrummaa jalatti waggaa 100 kufee jiru Sammuu Isaa itichuun akka inni MI’AA Bilisummaa Baratee akkasuma Hadhaa Gabrummaas Maal akka taate baratee Daandii bilisummaa fi Waraaqsaa baratee akka inni wal jala Hiriiruuf kan karaa saaqudha ykn banuudha . kana males Saba tokko Seenaa , Aadaa , Afaan ISaa , Biyya isaa fi kkf saba fi biyya san guddisuun Doofummaa jalaa baasuun Adunyatti ol qixxeesseen dhaloota itti aanuuf karaa sassaaqee kan kaahuudha .
2 . Ergaa SHarrii ykn Fokkattuu <<<< Hawaasuma akka ummata oromoo kana Gabrummaa jalatti akka kufuu fi akka inni Mi’aa Bilisummaa hin barre doofaa tahee Ergamtuu namaa tahee hafu fi Gabrumaa jalatti kufee Daandii Bilisummaa fi Walabummaa hin gonfanne yeroo gara yerootti sammuu isa burjaajessuun kaayyoo isaa jeeqanii bara dhufaa darbaa diina jalatti kufee hafuuf kan dhaabbatuudha . Miidiyaan kun kaayyoo nama san dhaabee fi waan inni irratti dhaabbateef san galmaan gahuun kan socho’uudha .
Kana hubannee Hawaasni oromoo Gabrummaa jalatti Waggaa 100 oliif kufee jiru Kaayyoo hawaasa keenya galmaan gahu irratti deemuu fi Hawaasa biraan gahuun dirqama bu’uressitootaa fi itti gaafatamtoota warra miidiyaa irra taa’anii haasawa dabarsan Gaazexeessota dabalatee abbootii seenaa cufa isaanii kan ilaaluudha .
Miidiyaan tokko ummata oromoof dhaabbate jechaa ilma oromoo ija wal qixaatiin laaluu fi farsuun isarraa kan eeggamuudha . Kana kan nu jechisiise Akkumma Hammeenya Juneeydii Saaddoo irraa dubbattanitti maali OBBO ALAMAAYYOO ATOOMSAA hin dubbatinaan gaafii yeroo ammaati . Miidiyamaan kamiiyyuu Gadda fi faarfannaa Obbo alamaayyoo Atoomsaaa akka nama jabaa tokkotti kan irra dubbatan Juneeydiin hoo maal isin godhee fi hammeenyi isaa hanganuma hunda maali . waan ummani oromoo hin beekne isinirratti raawwate moo qurrama isarraa dhuunfaan qabdan gara miidiyaa ummata oromoof bu’uureffame irratti fiddanii kan oduu hin taane dabarsitaniif .
Miidiyaan keenya kan du’e gara qabrii keesatti gad kutee gaddee itti dhagahame ibsuu fi Boohuu akkasuma faarsuu malee kan jiruun dararaa fi rakkinna keessa jiru kan boru irraa fayadamuu fi nu gargaaruu dandahu irraa dubbatuu hin dandahuu . Kan du’e waan dalageen gara fuula rabbii kute . kan nuti boohuu fi gaddus faarsus dandeenyu kanuma jiru kana tahuu hubannee Aadaa kan jiruuf boonnuu wal dhaalchisuu qabna . ” Jiraan naman qabuu ” du’aan namandhabu “jetti oromoon
Kana kan Nu Yaadachiisu Miidiyaa shanee Torbaanitti ykn Baatitti kan daqiiqaa 30 dabarsu nu yaadachiisa . Inni Sunuu Torbaanuma ykn Baatitti yeroo dhufu Kijiba gorguddaa Gaangeen Baachuu hin dandeenye fidanii kan wanti takka lafa hin jirree fi homa hin dalagamin akka waan dalaganiitti haasawaa turan kan nuti cufti yaadannu Waraanni WBO Zoonii baha oromiyaa keessa socho’o waraana 500 ol ajjeesee gara 800 olitti tilmaamu madeessuun kan hafan booji’uun meesaa waraanaa wayyaanee irraa saamuuf dantaa qabsoo bilisummaa oromoof akka galu goone jechaa turan . yoom kana qofa Waraanni WBO Qabsoo godhetti milkaawuun FINFINNEE Toohachuuf Kiilo meetira waa xinno qofatuu nu hafe jechaa turanii . Osomaa kanaa jechaa turanii Torbaan osoo hin geenye Mootummaa wayyaaneetiin walii gallee jechuun AMAARA Wajjiin harka wal qabatanii ka’aa ni gallaa jechuun kan lafa jalaan walitti gungumantuu as bahe . kun waan kolfaati wanti jara tanaa waan dubbatamee dhumuu miti . AKKA MAMMAKNI JEDHE ( OSOO BEEKUU huuba wajjiin ) jette sareen .
Miidiyaan SHaneeTorbaanitti ykn Baatitti DHufee HAR’A Obbo Juneeydii Saaddoon Akkana jedhuu fi tarree warra diina hamaa Gubbaa kaahus tahee SHaneen umrii isii guutuu dalagan Tan Juneeydii SAADDOO ummata oromoo fi oromiyaaf buuse takka ( 1 ) cinaa hin Geettu .
( Jaarmenyi Oromoodhaa Torbaan dhiichisaaf wal waama <<< Torbaan lammataa ammaa Wal DHiittichaaf >>>walitti dhufa jechuun nuuf mammakan ) Amanni yeroo ammaa gama miidiyaalee fi ijaarama jaarmayoota keenyaa gamanumatti deemaa jira fakkaata .
Previous OMO VALLEY TRIBES -THE VANISHING CULTURES OF ETHIOPIA
Next “UF HIN BEEKNEEN NAMA HIN BEEKTU JEDHA OROMON”
History repeats itself; this time history denied to repeat itself completely concerning Oromo individuals who collaborated with colonizers:Habeshans.Juneedin Saddo who was devotely served the new colonizers escaped to save his life but could not save his integrity and conscience.Namni garaaf hinduu gurraaf duaa jedhama dur.Maqaa uuf nyaate nama uufilee nyaatee odo harka jarat waa taee.jaruma jala bayu isatifu harka irra qabuun barbachisa nati fakkata.Now those of you who try to justify and defend him unknowingly expose him for danger.Those who criticize him they have grounds and tangible evidences but hurried to demonize him.As educated person his collaboration with neo colonizers made him double fold criminal compare to those previous collaborators.His humiliation and escape and asylum seeking still a lesson for those who devoutly serving for Habeshan interest rather than his own nation national interest.
bosona oromiyaa duraan durse yeroo Junedi Saddo ilma oromoo jette hadoddii qabdu agarisistuu hin yelootu? warri inni risasaa dinnaani ficisisee ilmaan enyuuti? ilmaan oromoo miti? yoo gandumma ta’ee atis Junedi wajiin boola seni. yeroo warra kan balalefatuu kan ganda kee ballaa irra cabsitu atu samuu hin qabdu, Enyuu akka tatee gare gandummaan oromoo jiduti hin dalaguu atis oromoo ajessuu sana keessa qooda qabda ta’aa.
bayee nama aja,ibdan worron olola hin tanee odeesitaa ati adam enuun loluuf enuun akaana jedhartaa kijibaa odu hufee kan haasoftuu juynedin dhiraa woyaanee haa dogongorsitu male kanaaf woyane bar garaa jalaatiin godhefiti kan dhufe kanaafuu wonta hin taanee hin alba,iinaa ofii keessaa wol gorfane oromoon akka bilisoomtuu haa goonuu